Munyori weZimbabwe akasunga maonero ake ezvematongerwo enyika - teles relay
Munyori weZimbabwe akasunga maonero ake ezvematongerwo enyika
Muwori anozivikanwa Tsitsi Dangarembga akasungwa mushure mekunge vatongi varambidza kuratidzira kwehuwori uye kuoma kwehupfumi.
Zimbabwe Covid-19 varwere 'vanofira kumba'
Varwere vemuZimbabwe "vanofira munzvimbo dzekupaka zvipatara ...
Zimbabwe: Kubhadhara kwemabhiriyoni mazana matatu emadhora pamadhora ...
Mubairo-anokunda munyori Tsitsi Dangarembga akasungwa muguta reZimbabwe sezvo mauto akachengetedza migwagwa yemadhorobha kudzivirira kuratidzira kwakatemerwa hurumende nevanodaidzira pamusoro pe vanoti huori hwenyika uye hupfumi hwenyika huri kuramba huchiwedzera.
Mucherechedzi uyu anonzi akazopinda mumota yemapurisa neChishanu apo airatidza mumugwagwa muguta guru, muHarare, padhuze nemumwe muratidzira, akatakura zviratidzo. Mapurisa akange arambidza kuratidzira uku, achiyambira kuti chero munhu aenda "achangozvipa mhosva."
Kusungwa! KuBorrowdale. "Oo zvichaita," akadaro paTV nguva pfupi yapfuura uye akatumira mufananidzo wake wakagara pasi nemumwe muparidzi.
“Zvinotaridza sokunge kuti ibasa rechisimba. Guy akauya akagadziriswa, "akawedzera Dangarembga .
Yakauya mazuva mashoma mushure meiyo yake yemusiano, Iyi Inotyisa Muviri, yakapinda mune yeiyo mukurumbira Booker Prize.
Fadzayi Mahere, mutauriri wemukuru bato reMovement for Democratic Change, akatiwo pama media enhau kuti akasungwa kuti aratidze muvakidzani wake. Mahere akaisa vhidhiyo yemapurisa achiuya kwaari achimuudza kuti arege kurekodha. Iye gare gare akatadza kusvitswa kuti apindure.
Zvichakadaro, migwagwa yakanga isina chinhu mumataundi nemumaruwa mhiri kweZimbabwe mazana emazana emauto nemapurisa, vachichengetedza nzvimbo dzekutarisa nekuisa chivharo che coronavirus.
"Mamiriro ekunze ari munyika akadzikama uye ane rugare" mutauriri wemapurisa, Paul Nyathi akadaro.
Vanopokana nezvematongerwo enyika uye vari nhengo yepolitburo, VaJacob Ngarivhume, kubva kuboka diki rinodaidzwa kuti Transform Zimbabwe, vakadana kuratidzira munyika yose, asi vanhu vakasara pamba mushure me chipingaidzo Vamwe varatidziri.
VaMnangagwa, avo vari kumanikidzwa kumutsiridza hupfumi hwenyika hwadonha, vakatsanangura mabiko akarongwa se "kupokana kupidigura hurumende yedu yakasununguka mukuzvitonga." Akayambira kuti vachengetedzi "vachamuka uye vakasvinura".
Zimbabwe iri kushushikana zvakanyanya nehupfumi munguva inopfuura gumi, yakayerwa nehupombwe, mari yemuno inodzikira nekukurumidza kupokana nedhora reUS nekushomeka kwakanyanya kwemari. Zvinofungidzirwa kuti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vemuZimbabwe havana mabasa epamutemo.
Vanotsoropodza vanoti VaMnangagwa, vakasungira a cover -husiku husiku moto uye kudzivirira wakasununguka kufamba svondo rapfuura kupora hutachiona hwekorona, kushandisa mukana wekuvhara kweCOVID-19 kupedza kupokana.
Zimbabwe yakanyora zvinopfuura zviuru zvitatu zvemakoriyuta uye makumi mashanu nevaviri vafa neChishanu, maringe ne data rakaunganidzwa naJohns Hopkins University.
Kwayedza: https: //www.aljazeera.com/news/2020/07/zimbabwe-author-held-stadors-empty-day-planned-protests-200731102908596.html
"Hapana chekugara pane" mukutarisana nedenda rinotadzisa kushanya!
DRC: Murwi kumabvazuva anovhura moto uye anouraya vanhu vangangoita gumi nevaviri